အမျိုးသား စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒီဂရီကောလိပ်တွင် ပညာသင်ကြားပေးသည့် ပြင်ပပညာရှင်များကို ဂုဏ်ပြ? - Yangon Media Group
အမျိုးသား စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒီဂရီကောလိပ်တွင် ပညာသင်ကြားပေးသည့် ပြင်ပပညာရှင်များကို ဂုဏ်ပြ?
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်ရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ပညာသင်ကြားပေးသည့် ပြင်ပပညာရှင်များကို ဂုဏ်ပြုပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒီဂရီကောလိပ်တွင် Business Management, Tourism & Hospitality Management, Journalism ဘာသာရပ်သင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အထိ လာရောက်ပို့ချပေးခဲ့ သော နယ်ပယ်စုံမှ ပြင်ပပညာရှင်များအား ဂုဏ်ပြုခြင်းအခမ်းအနားကို ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်မတို့ကျောင်းရဲ့သဘော သဘာဝအရ မတူတဲ့အချက်တစ်ချက်က ပြင်ပပညာရှင်တွေကိုဖိတ် ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဘာသာရပ်အလိုက်သင်ကြားပေးစေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ဆရာ၊ ဆရာမ တွေဆိုရင် ပရိုဂရမ်တစ်ခုတည်းသာမကဘဲ နှစ်ခုလောက်အထိ သင်ကြားပေးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျန်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေမလုပ်တာကိုလုပ်ထားပြီးပါပြီ။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်စရောက် ပြီးကတည်းက ကျောင်းအနေနဲ့ သင်ကြားရေးအတွက်ကို ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေသင်ကြားတာထက် ပြင်ပလုပ်ငန်းမှာတကယ် အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာမှ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို ဒီ ကျောင်းမှာသင်ကြားမယ်ဆိုရင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် ပိုပြီးတော့အတွေ့အကြုံ တွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ကစပြီးတော့ ဖိတ်ခေါ်သင်ကြားစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီ ကောလိပ်၏ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက် တာတင်တင်ထွေးက ပြောကြားသည်။
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒီဂရီကောလိပ်အနေဖြင့် သင်ကြားနေသောဘာသာရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးမှ ပြင်ပပညာရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်သင်ကြားမှုများပြုလုပ် နေသလို လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
ဦးကျော်နေဝင်းနှင့် ဦးဇွဲနေဝင်းတို့ အမှုကို တရားရုံးက ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြု
ကျိုင်းတုံ၌ ၁၈ ဘီး မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်၊ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
တောင်ကိုရီးယားက လိင်ဖြေဖျော်ရေးအမျိုးသမီးများနေ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ဒိုမီနီယံ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီးပြီဖြစ်၍ စုပေါင်းပ?
အတွင်းရေးမှူး လိုနေသော ဗစ်တိုးရီးယား ဘက်ခမ်း
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိ်မ်ရေး နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချ?